इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षा : काउन्सिल जुट्यो तयारीमा
इन्जिनियर्स नेपाल | भदौ २८, २०७६,
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा परीक्षा पास गरेर मात्रै लाइसेन्स लिन सकिने व्यवस्था छ । एमबीबीएस पास गर्नेहरुले बिरामीको जाँच गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सिको गर्दै इन्जिनिरिङतर्फ पनि परीक्षा लिएर मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
इन्जिनियरिङ लाइसेन्सका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको विधेयक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो । हाल राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा छ । यता इन्जिनियरिङ काउन्सिल भने ऐन प्रमाणीकरण भएलगत्तै परीक्षा लिने गरी तयारीमा जुटेको छ ।
काउन्सिलले इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष त्रिरत्न बज्राचार्यको अध्यक्षतामा परीक्षा समिति गठन गरेको छ । समितिमा प्राध्यापन परिषद्का सदस्यहरु, संगीतलाल नकर्मी, किरण दाहाल, शम्भु यादव, काउन्सिलका रजिष्टार खेमराज जोशीलगायत छन् ।
समिति परीक्षाको मोडलका विषयमा छलफल गरिरहेको छ । परीक्षा समितिको बैठक पाँचपटक औपचारिक रुपमै बसिसकेको छ । बैठकले वस्तुगत परीक्षा कम्प्युटरबाट लिनेमा सहमति जुटाएको छ ।
हाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले कम्प्युटर प्रणालीबाट प्रवेश परीक्षा लिँदै आएको छ । त्यस्तै, मोडल लाइसेन्सका लागि समेत यो प्रणाली अपनाउने भन्नेमा करिब–करिब सहमति भएको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्वडिनसमेत रहेका परीक्षा समितिका संयोजक बज्राचार्य बताउँछन् ।
‘तर, यही नै विकल्पमा गइहाल्ने भन्ने सहमति भने जुटिसकेको छैन’, बज्राचार्यले भने । विधागत रुपमा पनि इन्जिनियरहरुका लागि छुट्टाछुट्टै प्रश्न सोधिनेछन् । हाल नेपालमा इन्जिनियरिङका ४७ विधामा इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ ।
त्रिभुवन, पोखरा, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत हाल ५१ वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पस छन् । ती क्याम्पसहरुबाट हरेक वर्ष १० हजार इन्जिनियर उत्पादन हुने गरेका छन् । यसबाहेक वार्षिक पाँच हजारले विदेशबाट इन्जिनियरिङको पढाइ पूरा गर्ने अनुमानित तथ्यांक छ ।
परीक्षा लिएरमात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्थाले इन्जिनियरिङ शिक्षाकै स्तरमा सुधार आउने र कमसल खालका काम नहुने विश्वास संयोजक बज्राचार्यको छ ।
इन्जिनियर गुणस्तर नहुँदा विकास निर्माण दिगो नभएको वा गुणस्तरीय नभएको भन्ने आरोप समेत इन्जिनियरले खेप्दै आएका छन् । त्यसबाट बच्न पनि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
‘इन्जिनियर गुणस्तर हुँदा बाटोघाटो राम्रो बन्छन् । योग्य इन्जिनियर नेपालमै हुँदा देशलाई नै फाइदा हुन्छ । इन्जिनियर उत्पादन गर्न अभिभावक र राज्यको लगानी खेर जाँदैन’, पूर्वसचिव भइसकेका सिभिल इन्जिनियर भीम उपाध्याय भन्छन् ।
तर, गुणस्तरीय तथा दिगो विकास निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट र गुणस्तरीय निर्माण सामग्री र खरिद नियमावलीमा पनि भर पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विदेशबाट डिग्री किनेर ल्याएर इन्जिनियरिङ पेशा गर्दै आएको भनेर समेत आलोचना हुने गरेको छ । यसलाई रोक्न पनि लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उपाध्याय बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि इन्जिनियरले लाइसेन्स लिने व्यवस्था अभ्यासमा छ । अमेरिका, बेलायत, चीन, श्रीलंका, बंगलादेशलगायतका देशले परीक्षा लिएर मात्र इन्जिनियरलाई लाइसेन्स दिन्छन् । शैक्षिक योग्यताकै आधारमा इन्जिनियरलाई लाइसेन्स दिने देशहरु पनि छन् । छिमेकी देश भारतमा इन्जिनियरले लाइसेन्स लिनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन । तर, लाइसेन्स लिएकालाई बढी विश्वास गरिन्छ ।
६/६ महिनामा लाइसेन्स परीक्षा
इन्जिनियरिङमा स्नातक सक्नेलाई नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले यसअघि विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रका आधारमा लााइसेन्स दिने गरेको थियो । तर, इन्जिनियरिङ शिक्षामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पढाइ पूरा गरेकाहरुको काममै असर गरेपछि परीक्षा लिएर मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
काउन्सिलका अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाका अनुसार हाल इन्जिनियरको लाइसेन्सका लागि संकलित निवेदन अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न काउन्सिलमा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनेको छ ।
समितिले विवरण ठीक भएको वा नभएको अध्ययन गरेर लाइसेन्स प्रदान गर्ने प्रस्ताव काउन्सिलको बोर्डसमक्ष प्रस्तुत गर्छ । बोर्डको निर्णयका आधारमा लाइसेन्स प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रस्तावित विधेयक ऐन बनेर आएपछि भने परीक्षासमेत पास गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावित विधेयकमा ६÷६ महिनामा लाइसेन्स परीक्षा लिने प्रस्ताव छ ।
यसलाई सरोकारवालाहरुले पनि स्वागत गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा यस विधेयकमाथिको छलफलमा सरोकारवालाहरुले इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स नलिएका इन्जिनियरले गरेको सिफारिस नमान्ने प्रावधान राख्न माग गरेका थिए ।
इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक गरेकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेकै आधारमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स नम्बर प्राप्त गर्छन् । तर, ओभरसियरबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाहरु बढुवा हुँदै इन्जिनियर पदमा पुगे पनि लाइसेन्स नम्बर हुँदैन । सरोकारवालाले दिएको सुझाव मान्ने हो भने ओभरसियर पदबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरी बढुवा हुँदै इन्जिनियर पदमा पुगेकाहरुले गरेको सिफारिस अमान्य हुनेछ ।
Email * (will be kept confidential)
Comment Your View
इन्जिनियर्स नेपाल | माघ १४, २०७७
अध्यादेश मार्फत इन्जिनियरिङ लाइसेन्सको परीक्षा गराउने कुरामा सत्यता छैन: अध्यक्ष निरौला
इन्जिनियर्स नेपाल | चैत २३, २०७७
इन्जिनियर्स एशोसिएसनमा डा. हरि बहादुर दर्लामीको नेतृत्वमा सिडेनको उम्मेदवारी दर्ता
इन्जिनियर्स नेपाल | चैत १७, २०७७
इन्जिनियर्स एशोसिएसनको चुनावमा २१ हजार ६४८ मतदाता, आफ्नो नाम हेर्नुहोस् (मतदाता नामावली सहित)
सडक बिभागमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलनमा, बजेट बक्तव्यको बुँदा नं ३०५ हटाउनु पर्ने माग
आठ निमार्ण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टिकरण
इप्पानद्धारा बजेटको स्वागत
मेलम्ची खानेपानीको मूलढोका बन्द, वैकल्पिक व्यवस्था गरिने
सरकारले स्थानीय पुर्वाधार बिभाग खारेज गरेकोमा ध्यानाकर्षण
आरओआरको पीपीए पर्खिनभन्दा जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी थाल्न उर्जामन्त्रीको आग्रह
Tweets by engineers_nepal
To stay updated with latest news
Engineers Nepal Multimedia Pvt. Ltd.
Editor: Er. Bhanu Shrestha
Department of Information Registration No.: 1400/075-76
© 2020, All rights reserved on EnginnersNepal.com